5 Magaalooyinka yar oo ciriiri ah Si Baadh In France | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka Faransiiska > 5 Magaalooyinka yar oo ciriiri ah Si Baadh In France
5 Magaalooyinka yar oo ciriiri ah Si Baadh In France
France waa inay magaalooyinka ay qurux badan oo dalka durkiya caan mahad kulkulul dalxiis loo jecel yahay. Dalku waa riyo caga caan ah adduunka oo ay dhaqan cajiib ah oo cuntada delicious. Iyada oo dad badan oo dalxiisayaal iyo ido in Paris, magaalada inta badan noqon kartaa mid aad u buux-, gaar ahaan xagaaga. Nasiib wanaag, France ayaa si ka badan in ay bixiyaan ka badan oo kaliya Paris, waxaana sahamiyaan shan ka mid ah magaalooyinka yar dadku ku hoos.
Reims waa magaalada iyo Champagne waa gobolka khamriga iyo labada tahay gabi ahaanba qurux badan. Waxaa ku yaala qaar ka mid ah ugu beero canab ah caanka ah ee dunida iyo Socdaalba hubin inay ku raaxaystaan ​​ay jawi xasilloon. Haddii aad tahay taageere champagne ah, bixinta booqasho yahay waajib ah. gobolka waa u qurux badan laakiin wax badan ka yar dadku ku badan caasimada dalka ee. Inkastoo in Champagne, hubi in aad qaadato qarsoon hanuunsan safar iyo in ka badan oo ku saabsan sida champagne la sameeyo bartaan.
Metz in Tareenadu Reims
Paris si ay Tareenadu Reims
Luxembourg in Tareenadu Reims
Lyon in Tareenadu Reims
Lyon ma aha oo kaliya si nabad ah fasaxa caga laakiin sidoo kale a UNESCO World Heritage Site ay sabab u tahay jajabkiisa Roman caan ah iyo matxafyada cajiib ah. Haddii aad tahay foodie a, Lyon waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican si ay ugu raaxaystaan ​​qaar ka mid ah ugu delicious macaan ee France, inkasta oo hubi inaad raadsatid la-talin ku saabsan caafimaad markii uu isku dayay cuntooyin cusub dibadda.
Waayo, kuwa xiiseyneyso naqshadaha, Lyon ayaa sidoo kale guri in a tirada Renaissance kaniisadaha in doona waxaad ka helli oo dhan kala firdhiyey oo magaalada u taliya.
Brussels si Tareenadu Lyon
London ilaa Tareenka Sare ee Lyon
Amsterdam si Tareenadu Lyon
Haddii aad xiisaynayso in cadar, Grasse waa meel ku fiican kuu. Marka aad soo martay ay xasilloon, raaxo jidadka, waxaad ka heli doontaa naftaada doonaya in ay mar kale iyo mar kale ku soo laabto. Grasse waa meel qurux badan oo ku yaalla weheliyaan Riviera Faransiis iyo, sida ugu wanaagsan ee ku yaab ah deegaanka halkan waa in aad ku tababarato Faransiis! !
Caan ku tahay isagoo magaalada labaad ee ugu weyn France, Marseille waa magaalo la cimilada cajiib ah xeebaha. Halkan waxaad ka heli doonaa jajabkiisa Tacaddi iyo yaab xarumaha tahay inaan kaa tago marti qaaday muddo saacado ah. Waayo, kuwa nasashada doonaya, Marseille hoy u tahay xeebaha cajiib ah meesha aad ku maydhaa karaa badda wacan. Marseille waxay bixisaa ugu wanaagsan ee labada Caalamka sidii loo buuxiyey hawlaha dhaqanka iyo sidoo kale goobaha degan in ay ku nastaan.
Montpellier in Tareenadu Marseille
Nice in Tareenadu Marseille
Paris si ay Tareenadu Marseille
Lyon in Tareenadu Marseille
Inta badan loo arkaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu underrated France ee, Lille ka yar dadku ku badan qaar ka mid ah dalal badan oo caan Faransiis laakiin weli si siman u qurux badan. dalxiisayaasha marayso karaa haad loogu fuuli jiray oo wuxuu ku raaxaysan Architecture midabo iyo nool jawi jidka. Waayo, waxaad tahay kuwii ku caashaqi jiray, ah Palace of Fine Arts museum waa meel waajib-booqasho sida ay hoy u tahay France ee ururinta farshaxanka labaad ee ugu weyn.
Brussels si Tareenadu Lille
Antwerp in Tareenadu Lille
Paris si ay Tareenadu Lille
Rouen in Tareenadu Lille
Marka booqanaya ama uunana socod France hubi in aan ka maqnaan mid ka mid ah magaalooyinka ku xusan! Sida ay yihiin wax ka yar buuxo, dhaqaaqin hareerahooda noqon doonaa effortless oo aad ku raaxaysan kartaa sifooyinka kala duwan ee magaalada kasta noqon doonaa. Mid ka mid ah wax aan magaalooyinkan oo dhan waxay leeyihiin in caadiga ah waa muuqaal qurux badan oo – Dabcan – cuntada la yaab leh, iyo danbaynti ha iloobin, Yurub oo qof tababar safarka la Save A tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-less-crowded-cities-to-explore-in-france/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
shaqada aan isagoo ah hanuuniye qayb waqti safar ee Kent iyo blogs oo ku saabsan waayo-aragnimo ah. Her hawl todobaadkan jecel yahay safar ku socdana South West Coast of Bristol a. Waxay sidoo kale waa doode xoogan oo nololeed waarta, iyo Dhawyahay inuu qoro buug ku saabsan waxa maalin maalmaha. Waxay iyada iyo waalidiinta iyo iyada Coco Frenchie la odhan jiray ku nool - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir
Waa Maxay Mode dhaqsaha The Of Travel In Europe?
Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe